Kooxda tifaftirka | Wararka Safarka
Actualidad Viajes waa degel Actualidad Blog ah. Websaydhkeenu wuxuu u heellan yahay adduunka safarka dhexdeedana waxaan ku soo jeedinaynaa meelaha asalka u ah halka aan ku talo jirno inaan ku bixinno dhammaan macluumaadka iyo talooyinka ku saabsan safarka, dhaqamada kala duwan ee adduunka iyo dalabyada ugu fiican iyo hagayaasha dalxiiska Dhawr sano oo badan ayaan soo saarnay a safarka Podcast kaas oo lahaa guul muhiim ah, gaaritaanka kaalinta koowaad ee Abaalmarinta Podcast ee Yurub qaybta Ganacsiga ee Spain iyo tan afraad ee Yurub sanadkii 2011 sidoo kale noqoshada finalka sanadaha 2010 y 2013.
Kooxda tifaftirka ee Actualidad Viajes waxay ka kooban tahay socdaalayaasha xiisaha leh iyo kuwa loo yaqaan 'globetrotters' noocyadooda kala duwan ku faraxsanahay inaan kula wadaago khibradooda iyo aqoontooda. Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto, ha ka waaban noogu soo qor foomkan.
Tan iyo yaraanteydii waxaan jeclahay inaan ogaado meelaha kale, dhaqamada iyo dadkooda. Markii aan safrayo waxaan qaadaa qoraallo si aan hadhow ugu soo gudbiyo, ereyo iyo sawirro, meesha loo socdo aniga ayaa ii ah waxayna u noqon kartaa qof kasta oo hadalladayda akhriya Qorista iyo socdaalku waa isku mid, waxaan u maleynayaa inay labadaba maskaxdaada iyo qalbigaaga aad u fogaan doonaan.
La wadaagida waaya-aragnimadayda adduunka oo dhan iyo isku dayga inaan ku baahiyo hamigeyga safarka waa wax aan jeclahay. Sidoo kale ogow caadooyinka magaalooyinka kale iyo dabcan xiisaha. Markaa inaan wax ka qoro arrimahan, oo aan ugu soo dhowaado guud ahaan dadweynaha, ayaa igu qancinaya qanacsanaanta.
Marwalba waxaan jeclaa luqadaha aduunka oo idil. Marka macallin Ingiriisiga ah, sidoo kale waxaan jeclahay inaan barto luuqadahaas ama lahjadaha kala duwan marka hore. Safar kasta oo aan tago waa barasho cusub oo aan xasuusan doono intaan noolahay.
Ka qalinjabiyey Xayeysiinta, waxaan jeclahay inaan qoro oo aan ogaado sheekooyin iyo meelo cusub ilaa inta aan xasuusto. Socdaalku waa mid ka mid ah hamigeyga waana sababta aan isku dayo inaan u helo dhammaan macluumaadka ku saabsan meelahaas aan rajeynayo inaan arko maalin uun.
Waxay yiraahdaan waxaa jira noocyo badan oo safar ah sida dadka adduunka ku nool oo kale. Safaradayda oo dhan waxaan ku baraarugay danaha kaladuwan ee aan ku tartami karno, marka Actualidad Viajes waxaan ku siin doonaa macluumaadka aad u baahan tahay si aad ugu raaxeysato fasaxyadaada meel kasta oo adduunka ah.
Waxaan u maleynayaa in safarku yahay mid ka mid ah khibradaha ugu qanisan ee qofku ku noolaan karo ... Ceeb, in lacag loogu baahan yahay tan, sax? Waxaan rabaa oo aan ka hadli doonaa dhammaan noocyada safar ee ku jira boggan laakiin haddii aan muhiimad siinayo wax, waa meelaha aan aadayo oo aan tago aniga oo aan ka tagin wax nasiib ah intaan ku sii socdo.
Tan iyo markii aan yaraa waxaan jeclaa marwalba in aan safro oo si tartiib tartiib ah ayaan u awooday in aan noqdo safar aan daalin. Meelaha aan jeclahay: Hindiya, Peru iyo Asturias, in kastoo ay jiraan kuwa kale oo badan. Waan jeclahay duubista fiidiyowga waxa aan jeclahay iyo wixii ka sarreeya oo aan ka qaado sawirradiisa sidii inuu yahay Japanese. Waxaan jecelahay tijaabinta gastronomy-ka dhaqameed ee goobta aan booqdo oo ii keenta xoogaa cuntooyin ah iyo waxyaabo aan guriga ku sameeyo oo aan kula wadaago qof walba.